Youtube ကိုထပ် - အလွယ်တကူကွင်းဆက် Youtube ကိုဗီဒီယိုများ - ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲဂီတကိုနားထောင်
Youtube ကိုဗီဒီယိုများ loop နဲ့ Repeat
ပြန်ကန်နှိပ်စရာမလိုဘဲ Youtube ကိုဗီဒီယိုများပြန်ဖွင်
အလွယ်ကူဆုံးလမ်းအတွက် loop YouTube ဗီဒီယို။ သင်အပြည့်အဝကိုဗီဒီယိုပြန်လုပ်ဒါမှမဟုတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရွေးပါ, YouTube ပေါ်မှာရှာတစ်ချိန်တည်းအတွက်ပေါင်းစုံဗီဒီယိုများစတင်နိုင်ပါသည် YouTube ကို Loop သုံးပြီးစ!
ရှာရန်သို့မဟုတ် Youtube ကိုထပ်ခါတလဲလဲပါစေ။
YouTube ကို Loop သုံးပြီးထပ်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း YouTube ဗီဒီယို
Youtube ကိုပြန်လုပ်ပါမည်သူမဆိုမောက်၏အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူကွင်းဆက် YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအချိန်ကိုက်ကဏ္ဍများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ အတောမသတ်ဂီတဗီဒီယိုများ, ရယ်စရာကိုဗီဒီယိုမြင်ကွင်းများ, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလောင်စာမီးသို့မဟုတ်ငါးပြတိုက်အဖြစ်သာယာလှပဗီဒီယိုများပြန်လုပ်, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသူတို့နှင့်အတူဝေမျှ!
∞ သငျသညျတဖနျနှင့်အဖန်ဖန်နားထောင်ဖို့ရှိသည်ဖို့ဒါမှစွဲသောဂီတစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီတဲ့အခါမှာ ...
∞ သင် tool ကိုနှင့်အတူအရေးယူမလိုဘဲ 1000 အချိန်များအတွက်ကြောင်းရယ်စရာဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်အခါ။
∞ သငျသညျကြော်ငြာမပါဘဲ YouTube ဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်သည့်အခါ။
Youtube ကိုထပ်ခါတလဲလဲ Button လေး
Chrome, Firefox, Opera က, Safari Microsoft က Edge များအတွက် Youtube ကိုထပ်ခါတလဲလဲ Button ကိုရယူပါ။
∞ Youtube ကိုပြန်လုပ်ပါ ← သင့်စာညှပ်များဘားမှဒီဆွဲပါ
❝ဤသည် script ကိုသငျသညျအလိုအလြောကျကွင်းဆက် YouTube ဗီဒီယိုကူညီပေးသည်။❞
စာနယ်ဇင်းများ Shift+Ctrl+D. Mac OS X ကိုသုံးပြီး အကယ်., စာနယ်ဇင်းများ Shift+⌘+D
သင်သည်တတ်နိုင် YouTube ကို Loop သုံးပြီးစ
Repeat, Cut နှင့် Loop
loop တစ်ခုလုံးကို YouTube ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ထပ်ပေါ်၏ကဏ္ဍများကို ထား. , ထို့နောက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း share!
(ထိုကိစ္စအဘို့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထဲကပဲစိတျအပိုငျး) YouTube ကိုအလိုအလျှောက်ဗီဒီယိုများ Repeat
သင်အကြိုက်ဆုံးယူကျု့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကန်ကိုနှိပ်ခြင်းမရှိဘဲထပ်ခါထပ်ခါ Watch ။
Infinite Loop များအတွက်သီးနှံ, ဖြတ်
တစ်ဦး Loop Create, အဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်အတွက်အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ် YouTube ဗီဒီယို၏အစိတ်အပိုင်း play ထို့နောက်ဗီဒီယိုသင်အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဖြတ်တောက်။
သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်၏အချိန် Customize (အစ / အဆုံး)
loop Youtube ကိုပြသစာရင်းကို
ရဲ့ login မရှိဘဲသင်၏ပြသစာရင်းများဖန်တီးပါ။
Youtube ကိုထပ်သီချင်းစာရင်းကို, Youtube ကိုသီချင်းစာရင်းကိုမွှေသို့မဟုတ် reverse ။
ဝန် YouTube ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
ကွန်ပျူတာနှင့်စမတ်ဖုန်းကိုကြော်ငြာမပါဘဲမျက်နှာပြင်အပြည့်အတွက် Youtube ကိုကြည့်ပါ။
အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာ၏မျက်နှာပြင် fit မှ resizes
အဆိုပါ thumbnail ကိုမှကစား button ကိုထည့်ပါ။
တစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းတွင် YouTube ဗီဒီယိုများအတွက်ရှာဖွေသည်။
သငျသညျကို Windows ကိရိယာ Linux ကို OS က, Mac ကိုစက်, Chromebook သည်, Android သို့မဟုတ် iPhone, iPad စမတ်တီဗီများကဲ့သို့သင်အကြိုက်ဆုံးပလက်ဖောင်းမဆိုအပေါ် YouTube ကို Looper ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်သူမျှမအကောင့်မရှိ downloads, ရုံဂီတ။
အလွယ်တကူကွင်းဆက် Youtube ကိုဗီဒီယိုများ - ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲဂီတကိုနားထောင်
အလိုအလျောက် YouTube ကိုဗီဒီယိုများ Repeat လုပ်နည်း
သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုရှာရန်သို့မဟုတ် YouTube URL ကို (သို့မဟုတ်ဗီဒီယို ID) ရိုက်ထည့်သငျသညျအထကျ input ကို box ထဲမှာပြန်လုပ်ချင်ဗီဒီယို၏။ သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Youtube ကိုထပ်လှည့်ကွက်ကိုသုံးပါ။
ထိုစာကိုအစားထိုး t အဆိုပါစာအားဖြင့် x အဆိုပါ Youtube ကိုဒိုမိန်းပြီးတော့စာနယ်ဇင်းအတွက် Enter. သင့်ဗွီဒီယိုကိုစဉ်ဆက်မပြတ် loop တစ်ခုအတွက်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
- ပုံမှန်ကဗီဒီယို Youtube ကိုအပေါ်ကိုတွေ့
- တိုင်းပြည်လင့်များ (uk, jp, ...)
- တာရှည် URL ကို
ကိုအဆက်မပြတ်ကစားကြောင်းညျ YouTube Video Make လုပ်နည်း
တစ်ဦး Loop Create
YouXube သငျသညျအပြည့်အဝကိုဗီဒီယိုသို့မဟုတ်တဦးတည်း၏တိကျတဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လုပ်မယ့် Loop ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦး Loop ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအတွက်ဗီဒီယိုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
တစ်ဦး URL ကိုမှသည်
YouTube ဗီဒီယိုပြန်လုပ်စေရန်, ရိုးရိုးရှာဖွေရေးဧရိယာထဲမှာ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခု URL ကို paste ။
သင် Loop ချင်သောအရာကိုဗီဒီယိုကိုသေချာမသိကြလျှင်, သင် YouTube ဗီဒီယိုများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ လာမယ့်စာမျက်နှာအတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုကိုကောက်နိုင်သည့်အနေဖြင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကတွေ့လိမ့်မည်။
loop အချိန်ဘောင်များအကြားတစ်ဦး Youtube ကိုဗီဒီယိုက
အစ / အဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ
သင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုကိုကောက်ယူကြပါပြီပြီးတာနဲ့သင်က start ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ကြိမ်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအက start drag and သင်သည်ချင်ပါတယ်အချိန်ကာလမှညွှန်ကိန်းပြီးစီး။ အခုဆိုရင်သင့်အကြိုက်ဆုံး YouTube ဗီဒီယိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, start / finish ကိုကြိမ်ဗီဒီယိုရဲ့ start / finish ကိုကြိမ်ဖြစ်ကြ၏။
အဆင့်သုံး: ဗီဒီယို၏ခေါင်းစဉ်ကို Customize
loop တစ်ခု Rename
သင်ချင်ပါတယ်ဘာပဲတစ် Loop အမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် Loop ကိုဖွင့်, နာမည်ပြောင်းပြီး Save လုပ်ရန် button ကို click လုပ်ပါ။
အဆင့်လေး: ဗီဒီယိုပုံငယ်များ customize
loop တစ်ခု Share
Facebook, Twitter Pinterest, အီးမေးလ်, ပင် WhatsApp ကိုသို့မဟုတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို: သင်ကဲ့သို့သောသင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ looped YouTube ဗီဒီယိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
မျှဝေခြင်းမပြုမီ, သင့်ဗီဒီယိုများလူတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်များအတွက်ထုံးစံ Youtube ကို thumbnail ကို image ကိုဖန်တီးပါ။
YouTube အ Loop ကိုအသုံးပြုရန်သင်တစ်ဦး HTML5 ကိုသဟဇာတ browser ကိုရှိရမည်။
သင့်ရဲ့မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများဒီနေရာမှာရှာပါ - Loop YouTube ဗီဒီယိုဘယ်လိုနေသလဲ?
+ YouTube ကို Loop ကဘာလဲ?
ဗီဒီယိုကအဆုံးရောက်ရှိပြီးနောက်မည်သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲအလိုအလျှောက်နောက်တဖန် start: ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ, အဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်တွင် YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုဆော့ကစားရာဝဘ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခု loop တစ်ခုအပေါ်ပြန်လုပ်မှရယူခြင်းအခြေခံတာဝန်ကဲ့သို့မြည်ပေမယ်ထိုသို့ပြုမှအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ရဲ့စိတ်ပျက်အများအပြားကြည့်ရှုထားခဲ့နိုင်သည်ပေလိမ့်မည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အဲဒီမှာသင်အကြိုက်ဆုံး YouTube ကိုဂီတဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်နမူနာထပ်ခါတလဲလဲသုံးမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လုံးဝအခမဲ့နှင့် iPhone နဲ့ Android စမတ်ဖုန်းများနှင့် Windows, Mac နှင့် Linux ကွန်ပျူတာများအပါအဝင်အားလုံးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလုပ်ပါပဲ။
• YouTube ကိုတွင် Method ကို 1. : ဗီဒီယို၏ဝင်းဒိုးကို right-click လုပ်ပြီး Loop ကို click
• YouXube တွင် Method ကို 2:
- ရလဒ်စာရင်းထဲကတဦးတည်းကဗီဒီယိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့, စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပေါ်တွင် input ကို box ကို အသုံးပြု. နဲ့ဗီဒီယိုတွင်ရှာပါ။
- သငျသညျကွင်းဆက်လိုနှင့်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပေါ်တွင် input ကိုသေတ္တာထဲသို့ယူကျု့ဗီဒီယို၏ URL ကိုတင်ပြီးမှအသင်္ချေအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်မယ်လို့သည့်ယူကျု့ဗီဒီယို၏ URL ကိုကော်ပီကူး ∞
- သငျသညျကွင်းဆက်ချင်ပါတယ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုများ၏ ID ကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပေါ်တွင် input ကိုသေတ္တာထဲသို့ယူကျု့ဗီဒီယိုများ၏ ID ထားထို့နောက်သင်္ချေအိုင်ကွန်ကိုနှိပ် ∞
• Method ကို 3: (ကို Android device များအတွက် YouTube ကို Repeaters လည်းရှိပါတယ်) အနေနဲ့ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင်အခမဲ့တေးဂီတအက်ပ် Install လုပ်ပါ။
+ တစ်ဦးက Web Browser ကိုကနေဘယ်လို Loop YouTube မှဗီဒီယိုများ?
2x မြန်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားမှာ YouTube ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လမ်းရှိပါသလား?
⓵ လောလောဆယ် YouTube ကိုသာ2ကြိမ်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းတက်အမြန်နှုန်း။
⓶ သင်တစ်ဦးထိတွေ့မျက်နှာပြင်သုံးနေတယ်ဆိုလျှင်ဗီဒီယိုဧရိယာ, ဒါမှမဟုတ်ကာလကြာမြင့်စွာစာနယ်ဇင်း right-click လုပ်ပါ။
⓷ မီနူးကနေ Loop ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီပွိုင့်ကနေရှေ့ဆက်ဗီဒီယိုလိမ့်မည်ကွင်းဆက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ရိုးရှင်းစွာကွင်းဆက် option ကို uncheck မှအထက်အဆင့်တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုပုံဒါမှမဟုတ်စာမျက်နှာလန်းဆန်းခြင်းဖြင့်လုပျနိုငျသောကွင်းဆက်အင်္ဂါရပ်, disable အထိပါပဲ။
+ ဘယ်လိုလျှောက်လွှာကို install လုပ်ဖို့မလိုပဲ iPhone, iPad ပေါ်တွင်ကွင်းဆက် YouTube ဗီဒီယိုလော
တစ်ဦး desktop သို့မဟုတ် laptop ကွန်ပျူတာတွင်, YouTube ကိုသငျသညျအလိုအလြောကျသငျသညျကိုကြည့်နေတဲ့ဗွီဒီယိုပြန်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ဗီဒီယိုများထပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်မအခမဲ့, Third-party န်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင် YouTube ဗီဒီယိုထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်သင်ထိုကဲ့သို့သောဝှက်ထားသော menu ကို option ကိုမပြပါဘူးတဲ့စမတ်ဖုန်းအဖြစ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အသုံးပြုနေတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့နည်းလမ်းကြိုးစားကြချင်လျှင်, YouXube က်ဘ်ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
YouXube မည်သူမဆိုရိုးရှင်းစွာ၎င်း၏ရှာဖွေရေးလယ်သို့ဗီဒီယို၏ URL ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, ဒီမဆိုစက်ပေါ်ရှိမည်သည့် web browser ကိုပြုနိုင်ပါသည်။
+ ငါဘယ်လိုကူးယူနှင့်မိုဘိုင်း Device များပေါ်တွင် YouTube URL များကို paste သလဲ?
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင်, သငျသညျလျင်မြန်စွာကီးဘုတ် shortcut ကိုအတူ link ကို copy နိုင်ပါတယ် Ctrl + C နှင့်ကီးဘုတ် shortcut ကိုအတူ link ကို paste Ctrl + V.
မိုဘိုင်း device ကိုတွင်, စာနယ်ဇင်းနှင့်ကိုင်ပြီးတော့မိတ္တူသို့မဟုတ်ငါးပိ option ကိုရွေးပါ။
+ ဒီစာမျက်နှာတစ် YouTube ကိုမိတ်ဖက်ဖြစ်သနည်း
ဤစာမျက်နှာကို YouTube ဖြင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဤ site တစ် Youtube ကိုမိတ်ဖက်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဤထပ်ပေါ် YouTube ဗီဒီယိုကစားရန်တရားဝင်လမ်းမဟုတျပါဘူး, ကယ့်တတိယပါတီအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
+ ဒီ YouTube ကိုထပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကြောင့်စိတ်ချရသနည်း
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒီတော့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုဒေတာအသွားအလာ SSL ကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ဒီလုံခြုံကွန်ယက်ကို protocol ကိုအတူ, သင့်ရဲ့ဒေတာကိုတတိယပါတီများအားဖြင့်လက်လှမ်းမီရာမှကာကွယ်ထားသည်။
+ သင်ကစောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင်, Youtube ဗီဒီယိုကို stuttering သလဲ?
သင့် browser ကို restart ချလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို၏ CPU အသုံးပြုမှုစစ်ဆေးပါ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်လျှင်အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသတ်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ device ကို restart လုပ်ပါဖို့ကြိုးစား (80% ကျော်) လည်းမြင့်မားသည်။
ကယူကျု့ဗီဒီယို (480p သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း) ၏အနိမ့်အရည်အသွေးဖြစ်နိုင်သော switch ကိုဖွင့်ပါ။
+အနှေးကို Motion သို့မဟုတ်အမြန်ရွှေ့လျားတွင် YouTube ဗီဒီယိုများ Watch မှဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်ရဲ့ browser မှာမဆိုယူကျု့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ဖွင့်ပါ
(ကထိပ်တန်းကကျော် HD ကိုပြောပါလိမ့်မယ်) တဲ့ setting များကို Cog များအတွက်ကစားသမား၏အောက်ဆုံးညာဘက်မျှော်ကြည့်
အဆိုပါမြန်နှုန်း option ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (က default အနေဖြင့်ပုံမှန်အပေါ်ဖြစ်သင့်)
အနှေးလှုပ်ရှားမှု: 0.25, 0.5, 0.75
မြန်နှုန်းကိုတိုးပှား: 1.25, 1.5, 2
တနည်းအားဖြင့်, သင် controller ကိုအတွက်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ချဖို့နှစ်ခုခလုတ်ရှိပါတယ်ရသော Youxube ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
တက်မြန်စေသို့မဟုတ် YouTube ကိုဗီဒီယိုများနှေးကွေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပိုမိုမြန်ဆန်မြန်နှုန်းမှာ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျနော်တို့ကပြန်ကျော့နှုန်း option ကိုတစ်ခုတိုးရနိုင်သလား?
အနှေးကို Motion သို့မဟုတ်အမြန်ရွှေ့လျားတွင် YouTube ဗီဒီယိုများ Play မှဘယ်လိုနေသလဲ?
+ YouTube ကိုဗီဒီယိုများ (2x, 3x နှင့် 4x ကျော်) အရှိန်မြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လောလောဆယ် YouTube ကိုသာ2ကြိမ်ဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းတက်အမြန်နှုန်း။
+ Android နှင့် iPhone ပေါ်မှာ YouTube ကိုပြသမှုမြန်နှုန်းပြောင်းနည်းဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျနော်တို့စတင်ခင်မှာသေချာသင်က App Store သို့မဟုတ် Google ကိုသွား Play နှင့် YouTube အက်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို update လုပ်ရမည်။
အဆိုပါ app ထဲမှာမဆိုယူကျု့ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပါ
သင် screen ပေါ်မှာမွမ်းမံလေ၏အားလုံးခလုတ်တွေ့နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကိုထိပုတ်ပါ
သင့်ရဲ့ screen ၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ3အစက်ကိုထိပုတ်ပါ။ ဤဗီဒီယိုအား setting များကိုတစည်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
setting များကိုစာရင်းများတွင်ပြသမှုမြန်နှုန်းထိပုတ်ပါ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဟုသတ်မှတ်ရပါမည်။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ် iPhone ပေါ်မှာသငျသညျအစားဇာတိမိုဘိုင်း app ၏မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ကစားသမား (m.youtube.com) ရက်နေ့တွင် YouTube ဗီဒီယိုကစားရန်ရွေးချယ်ပါကအခါ, ထို့နောက်သင်သည် YouTube ဒိုမိန်း YouXube ဖြစ်လာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
+ ဘယ်လိုအခြို့သောအချက်အနေဖြင့်ကွင်းဆက်တစ် youtube ကဗီဒီယို?
သင်ဘယ်လိုကွင်းဆက်အချိန်ဘောင်များအကြားတစ်ဦး Youtube ကိုဗီဒီယိုကကြသနည်း
ဗီဒီယိုတစ်ခုသာသောအဘို့ကိုကွင်းဆက်မှ Youtube ကို repeater အတွက်လျှောဆွဲယူပါ။
+ ဘယ်လိုမိုဘိုင်းပေါ်တွင်ကွင်းဆက် Youtube ကိုသီချင်းစာရင်းကိုသလော
သင့်ရဲ့ browser မှာမဆို YouTube သီချင်းစာရင်းဖွင့်ကိုဖွင့်
YouTube အဒိုမိန်း YouXube ဖြစ်လာပြောင်းနည်းသင်တို့ရှိသမျှအစုံပါပဲ။
ရိုးရှင်းတဲ့ယူကျု့ဗီဒီယိုကို Loop tool ကို
တစ်ဦး Loop Creating ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အလိုအလျှောက်ပြန်ကန်ကိုဖွင့် ...
ဂရိတ် app ကိုကွင်း play သို့မဟုတ်သီချင်းဆိုသီခငျြးမြား၏စိတျအပိုငျးသင်ယူခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာငါလေ့ကျင့်ဖို့တစ်လျှောက်ဆော့ကစားအဖြစ်ဂီတ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လုပ်မှရှာဖွေနေခဲ့သည်ရုံပါပဲ။ အဆိုပါရှယ်ယာ feature ကိုမဆိုကျောင်းသား / တီးဝိုင်း / ကလပ်အုပ်စုတွင်အခြားသူများနှင့်ဗီဒီယိုကို segments များဝေမျှဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မည်။
High School တွင်ဆရာ, Paris
ငါသည်ငါ၏လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဘို့အဖွင့်စာရင်းများကိုဖန်တီးရန်ဒီ app ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ရုံတစျခုခြေရာခံပြန်လုပ်သို့မဟုတ်သင်ပြသစာရင်းရှိလူအပေါင်းတို့သည်သီချင်းနားထောင်နိုင်တယ် Auto-ကစားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှောက်လွှာ။
သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး Analyst,, Silicon Valley
ငါသည်သင်တို့ကိုဗီဒီယိုတိကျတဲ့ကြိမ်အကြား loop တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ချစ်ကြ! ကျိန်းသေ app ကိုငါ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်း။
ဒီ app ကိုချစ်! ငါ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုကွင်းဆက်ကဒါလွယ်ကူစေသည်!
အတိအကျအဘယ်အရာကိုငါလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂီတကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ငါအကြိမ်ကြိမ်ကစား hit ရန်မလိုဘဲကွင်းဆက်အပေါ်လေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာပါသီချင်းတွေကိုနားထောင်နိုင်သည်။
ငါကဗီဒီယိုကြာကြာသင်ကခငျြထက်လျှင်, သင်ကအတိုကောက်နိုငျပုံကိုချစ်ကြတယ်။ ငါ့အဲ့တာကိုသဘောကျတယ်။ ဆက်ကြောင်းသို့မဟုတ်ကြော်ငြာတွေမဟုတ်ပါ, ကိုယ်ကချစ်ရမရစရာအကြောင်းမရှိကြည့်ပါ။
ဂီတ Lover, Munich
ဤသည်မှာဖော်ပြထားအတိအကျအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အကြီးအ App ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကအလွန်ပျော်ပါတယ်ကအကြံပြုလိမ့်မယ်။
ဒီ app ကိုသင် YouTube ပေါ်တွင်သင်ချင်နေတဲ့သီချင်းတစ်ဦးတိုးချဲ့ဗားရှင်းမတှေ့နိုငျသောအခါတွေအများကြီးဒီ app ကိုအောင်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကူညီပေးသည် Love ။
စိတ်ပညာရှင်, Rio De Janeiro
ငါသည်ဤကြောက်မက်ဘွယ် app ရဲ့ devs တန်ဖိုးထား, ဝမ်းနည်းစွာ YouTube ကိုကွင်းဆက်အင်္ဂါရပ်ပေမယ့်ဒီ app ကိုအောင်အတှကျကြေးဇူးတငျထောကျပံ့ပေးမထားဘူး။
ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ဗိသုကာ, San Francisco
ဘဏ္ဍာရေး Manager ကို, Florence
ပို့ချချက်ဘာသာစကားနှင့်လည်းလေ့လာနေဘို့ကြီးသော။ ကျွန်မကစားသို့မဟုတ် resolution ဖြင့်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဆိုဒ်ကိုမျှဝေခြင်းများစွာသောအခြားအသုံးဝင်သော features တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လျှောက်လွှာတစ်ခုမက်လုံးပေးဖြစ်ပါသည်
© YouXube 2019 - Youtube ကို Player ကို 0.0.1